10-ka Zig Ziglar ee xigashooyinka 2020 - xigashooyinka Pedia
13 xigasho iyo odhaah
Zig Ziglar waa qoraa, dhiirigeliya hadla iyo waliba iibiyaha. Hagaag, wuxuu caan ku yahay wadahadalada dhiiri gelinta leh, ee dadka ka caawiya inay ka gudbaan waqtigooda adag. Sidookale, awooda khudbadiisa, wuxuu ku dhiiri galiya dad badan inay nolosha adag ku shaqeeyaan.
Ka sokow, wuxuu ka mid yahay dadka ku soo daray khudbadiisa khudbadaha Masiixiyiinta. Hagaag, isagana wuxuu mas'uul ka yahay qoritaanka tiro badan xigashooyin dhiirigelin leh, kaas oo dadka ka caawiya sidii ay horay ugu sii socon lahaayeen noloshooda.
Intaa waxaa sii dheer, wuxuu sidoo kale ahaa shaqsi siyaasadeed oo caan ah oo u adeegay Republicans-ka Mareykanka. Aad ayaan u nasiibdarro maxaa yeelay isagu ma sii kala dhexeeyo. Laakiin waxbaristiisa ayaa ah kuwo dhiirrigelin leh xitaa maalmahan.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan Xigashooyinka Zig Ziglar waa inaad ogaataa inuu yahay, "Hadaad wax ka barato guuldarada, runtii lumo." Hagaag, waa xigasho fudud laakiin saameyn ku leh oo aad la soo bixi doonto. Tixraackani wuxuu soo jeedinayaa inaad khaladaadkaaga ka dhigto aalad guusha.
Hagaag, hadaad wax ka barato guuldaradaada, uma tixgelin kartid inay tahay guuldaradaada oo dhan. Waxay ku siin doontaa aragtiyo waxtar leh oo aad raaci karto si looga fogaado khaladaadka mustaqbalka.
kale Xigasho Zig Ziglar taas oo kugu dhiirrigelin doonta waa, “Guul ma ahan meela la gaaro; waa safar. ” Tixraackani wuxuu sharxayaa xaqiiqda in safarka aad ku tageyso meesha aad u safrayso uu ka muhiimsan yahay halka aad u socoto meesha aad ka baran doonto dhammaan waxyaabaha waxtar u leh noloshaada safarkaaga.
Marka, waxa adiga kuugu fiican waa inaad jacayl ku dhacdaa geedi socodka. Ama haddii kale, waxaad waayi doontaa nuxurka nolosha haddii aad gaarto halkaad rabto. Maheli doontid waxyaabo kale oo aad sameysid marba marka aad gaarto yoolkaaga. Laakiin, haddii aad jeceshahay howsha, waxaad heleysaa dhiirogelin inaad mar labaad dib u bilowdo.
Zig Ziglar ayaa qortay xigashooyin kale oo badan, oo aad iska hubin karto. Dhex maro kuwaas xigashooyinka ayaa kaa caawin doona inaad firfircoonaanta nolosha ku ahaato.
Hadaad wax ka barato guuldarada, runtii lumo. - Zig Ziglar
Noloshu waxay ina siisaa waayo aragnimo kala duwan. Had iyo jeer ma fahamno sababta ka dambaysa dhacdooyinka oo dhan. Laakiin…
Guushu maahan safar, waa safar. - Zig Ziglar
Noloshu waxay noqotaa mid xiiso leh maxaa yeelay dhammaanteen waxaan haysannaa riyooyin iyo damacyo kala duwan oo aan higsanno. Waxay nagu kallifaysaa dhiirrigelin…
Jooji cabsooda waxa qaldami kara oo bilaw inaad ka dhaadhiciso waxa saxda ah. - Zig Ziglar
Noloshu waxay leedahay qaybteeda kor iyo hoos iyo runta in lagu dabaqi karo aadanaha oo dhan. Sidaas darteed,…
Khasab kuguma aha inaad bilowdid, laakiin waa inaad bilowdaa inaad weynaato. - Zig Ziglar
Qofna (oo aad adigu ku jirto) weligood kuma riyoodaan inay noqdaan iskucelcelis oo aan weyneyn. Si fudud waad jiifsan kartaa…
Haddii aad ku riyoon kartid, markaa waad ku guuleysan kartaa. - Zig Ziglar
Riyooyinkeenna iyo hamigeenna ayaa nolosha naga sii haya. Waxay nagu dhiirrigelisaa inaan gaarno oo aan guuleysanno. Dhamaan…
FEAR: wuxuu leeyahay labo macne: 'Wax kasta illow oo Orod' ama 'Weji Waxkasta oo Kac.' Xulashada adigaa iska leh. -…
Wadooyinka adag waxay badanaa u horseedaan meelo qurux badan. - Zig Ziglar
Marwalba waxaa jiri doona dad noloshaada kuula dhaqmaya si qaldan. Hubso inaad uga mahad celiso sida ay kuu xoojiyeen. - Zig Ziglar
Waqtiyada qaarkood, waxaan haysanaa dad badan oo hareeraha ka ah oo sii wado ula dhaqma hab qaldan. Adiga…
Nolosha 3 C ee nolosha: Kala doorashada, fursadaha, isbedelada. Waa inaad doorataa inaad fursad qaadatid ama noloshaadu waligeed is bedeli mayso. - Zig Ziglar
Hagaag, kulligeen waxaan ku nool nahay nolol aad u mashquul badan. Waxaan sameyneynaa wax walba si aan awood ugu ...
Waxa aad kuhesho gaarista gaaritaanka yoolalkaaga muhiim uma ahan waxa aad ku noqotid adoo hadafkaaga ah. - Zig Ziglar
Hagaag, ku dhawaad ​​dhammaanteena waxay leeyihiin ujeeddo nolosha. Iyo inaan gaarno himiladaas, waxaan sameyneynaa dhammaan…
Ha u oggolaan dadka diidmada ah iyo dadka sunta ah inay madaxaaga meel ka dhigaan. Kac ijaarka kor u qaad oo iska tuur. - Zig Ziglar
In kasta oo aan ku soconno dariiqa nolosheenna, waxaan la macaamilaynaa dad aad u tiro badan. Waxaan la kulannaa…
Markaad aaminto, rajo iyo jacayl wada jir ah, waxaad ku barbaarin kartaan caruur wanaagsan adduun taban. - Zig Ziglar
Markaad aaminto, rajo iyo jacayl wada jir ah, waxaad ku barbaarin kartaan caruur wanaagsan adduun taban. -…